Kitapo Vector Noely Taona Vintage | Famoronana an-tserasera
Iray amin'ireo fomba fampiasa be indrindra hiarahabana ny Noely ny Retro / Vintage, ary io dia iray amin'ireo kanto sy voadio indrindra hampidirina amina firaketana an'io karazana io. Nanandrana nanangona an'ity safidy ity aho izay entiko ho anao anio andiana vakera sy singa misintona maimaim-poana (Ao anatin'izany no ahitanao ny badge, ny labels, ny flyer, ny motif ...) hahafahanao mampiasa azy ireo amin'ny asanao ary manitsy azy ireo tsy misy olana. Krismasy Vector Krismasy Vavy Krismas Vector
Mazava ho azy fa mamporisika anao aho hiezaka hitady ny vahaolana mety indrindra amin'ny alàlan'ny fitarihana anao indrindra avy ny hevitrao manokana. Volavola lehibe (sy tany am-boalohany) dia mazàna avy amin'ny hevitrao aorizanao aorian'ny fandehananao hatrany hatrany ao an-dohanao. Ataovy ao an-tsaina fa raha mahavita manintona ny sain'ny hafa ianao dia ho avy amin'ny hevitra novokarina sy maneho hevitra ary manaitra. Tandremo ny loko, ny firafitra, ny fananganana ary ny singa izay toa tsy dia misy dikany (fa tsy) toy ny habaka banga.
Ary farany, ampahatsiahivo anao fa tamin'ny fotoana nanoratana an'ity lahatsoratra ity dia azo jerena ao amin'ny tranonkala voalaza etsy aloha ny atiny rehetra mifamatotra aminy. Raha manandrana miditra amin'izy ireo ianao ary tsy misy intsony, dia noho ny antony tsy voafehin'ny Creative Online. Na izany na tsy izany, raha manana karazana olana ianao amin'ny fidirana amin'ireo rohy dia mila mamela hevitra fotsiny ianao hampahafantatra anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Kitapo Vector Noely Taona Vintage